ရည်းစားမဖြစ်ခင်အပေါ်ယံလေ့လာနည်း – Shwe Innlay
တရားဝင်ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင် စောင့်ကြည့်ကာလတွေမှာ သူကဘယ်လိုလူဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဒီအချက်လေးတွေမှတစ်ဆင့် လေ့လာခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကို သတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။ ထိုင်တဲ့အခါမှာ မတ်မတ်လေးဖြစ်နေလား၊ ငိုက်စိုက်ပြီးထိုင်းမှိုင်းနေသလား? စကားပြောတဲ့အခါ သူ့မျက်လုံးတွေက သင်နဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ရဲပဲ အဝေးတစ်နေရာကိုပဲငေးကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သူဟာယုံကြည်မှုနည်းပါးတဲ့သူ။
သင်နဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့ မှန်မကြည့်ပဲလာသလိုဖြစ်နေသလား? ဆံပင်ရှုတ်ပွနေတာကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပြီး ခေါင်းမဖြီးထားဘူးလား? အချိန်မရှိတော့လို့ ရေမချိုးထားပဲ သင့်ဆီအပြေးလာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေသလား? ဒါဆို သူဟာလူပျင်းတစ်ယောက်ပါ။
ကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင် တံခါးဖွင့်ပေးပြီး သင့်ကိုဦးစားပေးသလား? ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့အခါ သင့်အတွက်တစ်ရှူးယူပေးသလား၊ ရေတစ်ခွက်ထည့်ပေးဖူးသလား? အစရှိတဲ့အသေးအမွှားအရာလေးတွေကအစ သင့်ကိုဂရုစိုက်ပေးနေရင်တော့ သူဟာပါးနပ်တဲ့လူပါပဲ။
သူ့မျက်လုံးကိုသေချာကြည့်ကြည့်ပါ။ မျက်လုံးအိတ်အောက်ဘက်က အရေပြားတွေတွဲကျနေသလား? တစ်ခါတရံ စကားပြောတဲ့အခါ၊ အသက်ရှူတဲ့အခါ အရက်အနံ့အသက်အနည်းငယ်ရနေသလား? ညညဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နိုက်ကလပ်၊ ပါတီပွဲတွေသွားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူမျိုးလား? ဒါဆိုရင်တော့ သူဟာ အရက်ကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်။
ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါမှာ အင်္ကျီပေါ်အမြဲစွန်းထင်းနေသလား? အစားစားတဲ့အခါမှာ အမြဲလိုလိုစားပွဲပေါ်မှာဖိတ်ကျတတ်သလား? ဇွန်းခက်ရင်း အောက်ကိုလွှတ်ကျနေတတ်သလား? ဒီလိုဆိုရင် သူဟာတော်တော်ကို ကို့ယို့ကားယားနိုင်လွန်းလှတဲ့သူပါ။
သင်သိသလောက် ဖက်ရှင်အကြောင်းဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ သင်ကဘယ်လိုဖက်ရှင်စတိုင်မျိုးကြိုက်တယ်ဘာညာပေါ့။ အရင်ခေတ်က ဖက်ရှင်အကြောင်းကိုတီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး သိတတ်သလောက် ပြောကြည့်ကြည့်ပါ။ သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကကောင်းမွန်နေရင် သူဟာဖက်ရှင်ကျကျနေတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
သင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးစကားပြောရာမှာ သင်ပြောသမျှစကားကို ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့နားထောင်နေတတ်သူလား? အမြဲပြုံးပြီးအကြည့်စူးရှသူလား? သင်နဲ့တွေ့သည့်အခါတိုင်း ပုံစံအချိုးမပြောင်းလဲပဲ ဖော်ရွေတဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါဆိုရင်တော့ သူဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
အသက် ၈၀ အရွယ် သင်းအုပ်ဆရာအဘိုးအိုက ၂၄ နှစ်အရွယ်လူငယ်နှင့် လက်ထပ်
ရုရှား၏အသက်အငယ်ဆုံးဘီလျံနာက သူ၏ချစ်သူဟောင်းကို ပြန်တွေ့သောကြောင့် ရုရှားသမ္မတပူတင်၏လျှို့ဝှက်သမီးကို ကွာရှင်းပြတ်စဲ
သမီးကို နွားအကောင် ၅၀၀၊ ကား ၃ စီး၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် လေလံတင်ကာ သတို့သားရှာခဲ့သည့် ဖခင်